Ra’iisul wasaare Kheyre oo si weyn u ammaanay ciidanka xasillinta caasimadda dalka (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Ra’iisul wasaare Kheyre oo si weyn u ammaanay ciidanka xasillinta caasimadda dalka (SAWIRO)
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa galabta kormeer shaqo ku tagey qaar kamid ah xarumaha ciidamada dowladda ee magaalada Muqdisho.
Ra’iisul wasaare Kheyre oo marka hore tagay xaruntii hore xisbiga ee ka mid ah xarumaha ay degan yihiin ciidamada xasillinta caasimadda ayaa kullan la qaatay saraakiisha islamarkaana halkaasi kula hadlay ciidamadda.
Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa uga mahad-celiyey ciidamadda xasillinta caasimadda horumarka dhanka amniga ah ee ay caasimadda ka sameeyeen mudada yar ee ay howl-gallada wadaan.
“Anaga iyo shacabka Soomaaliyeed, waxaa idin kaga mahad-celinaynaa howlgallada aad fuliseen oo ay cadowga ee kaaga hortagteen falalka cadowgu damacsanaayeen, dadaalkiina dad Soomaaliyeed ayaa ku bad-baaday, waxaana idinku ammaanayaa idinkooda ku shaqeeya duruufo adag sida sharafta leh ee dalkiina iyo qarankiina ugu adeegteen.
“Yeddediillo ayey na-gelineysaa horumarka dhanka amniga ah ee aad ka sameeyseen caasimadda tan iyo markii qorshaha xasillinta caasimada ay dejisay xukuumadda, waxaan dooneynaa inaad sii laba-laabtaan dedaaladiina ku aadan nabadeynta Muqdisho, dowladdana waxay kordhin doontaa wax walba oo awooddeeda ah si loo yareeyo daruufaha aad ku shaqeyneysaan”. Ayuuu yiri ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre.
Ra’iisul wasaare Kheyre ayaa u sheegay ciidamadda xasillinta caasimadda ee uu maanta booqday inay xoojiyaan xirriirka shacabka, si ay ugu sahlanaato ka hortagga falalka guracan ee kooxaha nabad-diidka.
“Shacabka waa inaad u nug lahaataan ulana dhaqantaan si dabacsan oo ixtiraam leh xiliyada aad ku jirtaan howlgallada ka dhanka ah kooxaha nabad diidka ee ku dhumaaleysanaya bulshada dhaxdeeda, si ay u sahlanaato wadashaqeynta aad la leedihiin shacabka” Ayuu yiri Mudane Xasan Cali Kheyre.
Sidoo kale, ra’iisul wasaare Kheyre oo koormeerkiisa shaqo ee maanta ku tagey xarunta Villa Baydhabo ee magaalada Muqdisho ayaa indha-indheeyey qaar ka mid ah xafiisyada hoggaamada ciidamada xoogga dalka.
Ra’iisul wasaaraha oo kullan la qaatay taliyaha ciidamada xoogga dalka iyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada xoogga ayaa kala hadlay sidii sare loogu qaadi lahaa xirfada, aqlaaqda iyo xuquuqda ay leeyihiin ciidamada.
Ugu dambeeyntii, ra’iisul wasaare Kheyre ayaa ku adkeeyay saraakiisha ciidamada xoogga in qorshaha isla xisaabtanka xukuumadda ee lagula dagaallamayo musuq-muusaqa loo daadijiyo sarkaal ilaa askariga dablaha ah, si loo hubiyo in askarta si hufnaan leh u helaan xuquuqdooda iyo garaam bileedka dowladda ay ku bixiso ciidamada xoogga dalka, waxaana kormeerka ra’iisul wasaaraha ku weheliyey wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya.